Ny politika momba ny fiainana manokana dia tsy famakiam-boky maivana. Niezaka izahay ny hanao izany ho mora araka izay azo atao, fa raha manana fanontaniana ianao amin'ny fotoana rehetra dia aza misalasala mifandray [email voaaro].
Tena manome lanja ny fiainanao manokana izahay. Tsy hamidy na oviana na oviana ny angon-drakitrao izahay ary hizara izany amin'ireo mpanodina avy amin'ny antoko fahatelo izay manana fifanarahana fiarovana amin'ny angon-drakitra napetrakay (ireo dia tolotra rindrambaiko toy ny rindrambaiko lisitry ny mailaka). Tsy hizara ny angonao manokana amin'ny antoko fahatelo izahay ho an'ny tanjona ara-barotra na fivarotana azy manokana.
Tahaka ny tranokala tsirairay dia manangona vaovao avy aminao izahay amin'ny toerana samihafa. Matetika izy ireo dia atosiky ny fangatahanao ary azonao atao ny manala ny tenanao amin'ny fifandraisana manaraka amin'ny fampiasana ny safidy tsy misoratra anarana amin'ny mailaka azonao. Tsy hiantso anao mihitsy izahay.
Ireo no fomba hanangonanay mivantana ny angona avy aminao rehefa ao amin'ny tranokalanay ianao. Raha manolotra ny iray amin'ireto endrika manaraka ireto ianao dia hanangona ny mombamomba anao manokana izahay mba hamela anay hikarakara ny fangatahanao. Dia izay.
Misoratra anarana amin'ny gazetinay, momba ny asa na ny fanavaozana bilaogy
Manaova fangatahana asa
Misintona kitapo fitahirizana
Ampidino ny torolàlana momba ny dianay na ny firenena
Mangataha antso na fivoriana
Manaova fangatahana hiditra amin'ny Blue Ventures Expedition
Alefaso ny taratasy fiaingana an-tsitrapo
Manangona angona voafetra avy aminao ihany koa izahay ho ampahany amin'ny fampandehanana ny tranokalanay. Mety ho tafiditra ao anatin'izany ny angona analyse sy ny pixel marketing dizitaly - azonao atao ny mahafantatra bebe kokoa momba izany ao amin'ny politikantsika cookie.
Raha manana fanontaniana momba ny iray amin'ireo ianao amin'ny dingana rehetra dia mifandraisa aminay [email voaaro]
Ity fampahafantarana momba ny fiainana manokana ity dia manome anao antsipirihan'ny fomba fanangonana sy fikarakaranay ny angon-drakitrao manokana amin'ny alàlan'ny fampiasanao ny tranokalanay sy ny subdomains:
Blue Ventures Conservation dia fikambanana mpanao asa soa ho an'ny fiarovana an-dranomasina (laharana 1098893) ary orinasa sosialy (Blue Ventures (Expeditions) Limited - Company No. SC233112) izay manana birao voasoratra anarana ao amin'ny Omnibus Business Center, 39–41 North Road, London, N7 9DP) (miaraka "Blue Ventures").
Blue Ventures no mpanara-maso ny angon-drakitra ary tompon'andraikitra amin'ny angon-drakitrao manokana izahay (antsoina hoe "isika", "isika" na "nay" amin'ity politika momba ny fiainana manokana ity).
Amin'ny fanomezanao anay ny angon-drakitrao dia manome antoka anay ianao fa mihoatra ny 13 taona ianao.
Raha manana fanontaniana momba ity politika ity ianao dia mifandraisa amin'ny: [email voaaro] na antsoy amin'ny +44 207 697 8598.
Adiresy mailaka: [email voaaro] or [email voaaro]
Adiresy paositra: Mezzanine, The Old Library, Trinity Road, St Jude's, Bristol BS2 0NW, UK
Tena zava-dehibe ny maha-marina sy manara-penitra ny vaovao voatanay momba anao. Azafady ampahafantaro anay raha miova ny mombamomba anao manokana amin'ny alàlan'ny mailaka aminay [email voaaro]
INONA NO ANTONY ANGONINAY MOMBA ANAO, AMIN'NY TANJONA INONA ARY EO AMIN'NY TANY AMIN'IZAY NO ANTONTSIKA IZANY
Ny angon-drakitra manokana dia midika izay fampahalalana rehetra ahafahana mamantatra olona iray. Tsy ahitana angon-drakitra tsy fantatra anarana izany.
Azonay atao ny manodina ireto sokajy data manokana momba anao ireto:
Data fifandraisana ao anatin'izany ny fifandraisana rehetra alefanao aminay na amin'ny alàlan'ny endrika fifandraisana amin'ny tranokalanay, amin'ny alàlan'ny mailaka, lahatsoratra, hafatra amin'ny media sosialy, fandefasana media sosialy na fifandraisana hafa alefanao aminay. Mikarakara ity angona ity izahay mba hifandraisana aminao, ho fitehirizana ny firaketana an-tsoratra ary ho fametrahana, fanarahana na fiarovana ny fitakiana ara-dalàna. Ny fototra ara-dalàna amin'ity fanodinana ity dia ny tombontsoanay ara-dalàna izay amin'ity tranga ity dia ny mamaly ny fifandraisana nalefa taminay, ny fitazonana ny firaketana an-tsoratra ary ny fametrahana, ny fanenjehana na ny fiarovana ny fitakiana ara-dalàna.
Data ho an'ny mpanjifa izay ahitana angona mifandraika amin'ny fividianana entana sy/na serivisy toy ny anaranao, anaram-boninahitra, adiresy faktiora, adiresy mailaka, laharan-telefaona, antsipirian'ny fifandraisana, antsipirian'ny fividianana ary ny antsipirian'ny karatrao. Amin'ny maha mpilatsaka an-tsitrapo anao amin'ny Blue Ventures Expedition dia angatahina ianao hanome angon-drakitra manokana saro-pady ao anatin'izany ny antsipirian'ny fitsaboana. Mikarakara an'io angona io izahay mba hamatsiana ny entana sy/na serivisy novidinao ary hitahiry ny firaketana ny fifampiraharahana toy izany. Ny fototra ara-dalàna ho an'ity fanodinana ity dia ny fanatanterahana ny fifanarahana eo aminao sy izahay ary/na fandraisana fepetra araka ny fangatahanao hanao fifanarahana toy izany.
Data an'ny mpampiasa izay ahitana angon-drakitra momba ny fampiasanao ny tranokalanay sy ny serivisy an-tserasera miaraka amin'izay angon-drakitra alefanao ho an'ny famoahana ao amin'ny tranokalanay na amin'ny serivisy an-tserasera hafa. Mikarakara ity angon-drakitra ity izahay mba hampandehanana ny tranokalanay ary manome antoka fa omena anao ny votoaty mifandraika amin'izany, mba hiantohana ny fiarovana ny tranokalanay, hitazomana ny backup ny tranokalanay sy/na ny angon-drakitra ary ahafahana mamoaka sy mitantana ny tranokalanay, serivisy an-tserasera hafa. ary raharaham-barotra. Ny fototra ara-dalàna amin'ity fanodinana ity dia ny tombontsoantsika ara-dalàna izay amin'ity tranga ity dia ny ahafahantsika mitantana tsara ny tranokalantsika sy ny orinasantsika.
Technical Data izay ahitana angon-drakitra momba ny fampiasanao ny tranokalanay sy ny serivisy an-tserasera toy ny adiresy IP anao, ny angona fidiranao, ny antsipiriany momba ny navigateur, ny halavan'ny fitsidihana pejy ao amin'ny tranokalanay, ny fijerena pejy sy ny lalan'ny fitetezana, ny antsipiriany momba ny isan'ny fampiasanao ny tranokalanay, ny firafitry ny fe-potoana ary ny teknolojia hafa amin'ny fitaovana ampiasainao hidirana amin'ny tranokalanay. Ny loharanon'ity angona ity dia avy amin'ny rafitra fanaraha-maso analyse anay. Mikarakara ity angona ity izahay mba hamakafaka ny fampiasanao ny tranokalanay sy ny serivisy an-tserasera hafa, hitantana sy hiarovana ny orinasanay sy ny tranokalanay, hanaterana ny votoatin'ny tranokala sy ny dokam-barotra mifandraika aminao ary hahatakatra ny fahombiazan'ny dokambarotray. Ny fototra ara-dalàna ho an'ity fanodinana ity dia ny tombontsoantsika ara-dalàna izay amin'ity tranga ity dia ny ahafahantsika mitantana araka ny tokony ho izy ny tranokalanay sy ny orinasanay ary hampitombo ny orinasanay ary hanapa-kevitra ny paikady ara-barotra.
Data momba ny marketing izay ahitana angon-drakitra momba ny safidinao amin'ny fandraisana ny varotra avy aminay sy ny antoko fahatelo ary ny safidinao amin'ny fifandraisana. Mikarakara ity angona ity izahay mba hahafahanao mandray anjara amin'ny fampiroboroboanay toy ny fifaninanana, fisarihana loka ary fanomezana maimaim-poana, hanaterana ny votoatin'ny tranokala mifandraika aminao sy ny dokam-barotra ary handrefesana na hahatakatra ny fahombiazan'ity dokambarotra ity. Ny fototra ara-dalàna amin'ity fanodinana ity dia ny tombontsoantsika ara-dalàna izay amin'ity tranga ity dia ny fandalinana ny fomba fampiasan'ny mpanjifa ny vokatra/serivisantsika, ny fampivelarana azy ireo, ny fampitomboana ny orinasantsika ary ny fanapahan-kevitra momba ny paikadin'ny varotra.
Azontsika ampiasaina ny angon'ny mpanjifa, ny angona mpampiasa, ny angona ara-teknika ary ny angona ara-barotra mba hanaterana votoaty sy dokam-barotra mifandraika amin'ny tranokalanao (ao anatin'izany ny doka Facebook na dokam-barotra hafa) ary handrefesana na hahatakarana ny fahombiazan'ny dokambarotra atolotray anao. Ny fototra ara-dalàna ho an'ity fanodinana ity dia tombontsoa ara-dalàna izay ny fampandrosoana ny orinasanay. Mety hampiasa data toy izany koa izahay handefasana fifandraisana ara-barotra hafa aminao. Ny fototra ara-dalàna amin'ity fanodinana ity dia na ny fanekena na ny tombontsoa ara-dalàna (izany hoe ny fampitomboana ny orinasanay).
Ny angon-drakitra saro-pady dia manondro angon-drakitra misy antsipiriany momba ny firazanana na foko, finoanao na filozofika, fiainana ara-pananahana, fironana ara-pananahana, hevitra ara-politika, mpikambana ao amin'ny sendika, fampahalalana momba ny fahasalamanao sy ny angona fototarazo ary biometrika.
Ho an'ny mpampiasa amin'ny ankapobeny ny tranokalanay sy ny serivisy dia tsy manangona angona saro-pady momba anao izahay.
Raha lasa mpilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny Blue Ventures Expedition ianao dia hanangona sy hikarakara angona saro-pady momba anao. Ny angon-drakitra ilainay amin'ny fanaterana ny serivisy ihany no angoninay sy ataonay, anisan'izany ny fiantohana ny fiarovana anao eny an-toerana.
Raha mangataka asa aminay ianao dia manangona angon-drakitra saro-pady ao anatin'izany ny fampahalalana momba ny fanamelohana heloka bevava sy ny fandikan-dalàna izay takiana amin'ny asa.
Mitaky ny fanekenao mazava izahay amin'ny fanodinana Data Saro-pady, ka rehefa manolotra ny antsipiriany ianao dia hangataka anao hanamarina ny fanekenao amin'ity fanodinana ity.
Raha takian'ny lalàna izahay hanangona angon-drakitra manokana, na araka ny fepetran'ny fifanarahana eo aminay ary tsy omenao anay izany data izany rehefa angatahina, dia mety tsy ho afaka manatanteraka ny fifanarahana izahay (ohatra, manatitra entana na serivisy. ho anao). Raha tsy omenao anay ny angon-drakitra nangatahana, dia mety tsy maintsy manafoana vokatra na serivisy nofantenanao izahay fa raha manao izany izahay dia hampandre anao amin'io fotoana io.
Ny angon-drakitrao manokana ihany no hampiasainay ho an'ny tanjona nangonina na tanjona mifanaraka tsara raha ilaina. Raha mila fanazavana fanampiny momba izany dia alefaso mailaka izahay amin'ny [email voaaro]. Raha toa ka mila mampiasa ny mombamomba anao izahay amin'ny tanjona vaovao tsy misy ifandraisany dia hampahafantatra anao sy hanazava ny antony ara-dalàna amin'ny fanodinana izahay.
Azonay atao ny manodina ny angon-drakitrao manokana tsy misy fahalalanao na fanekena izay takian'ny lalàna.
Tsy manao fanapahan-kevitra mandeha ho azy na karazana profiling mandeha ho azy izahay.
NY FOMBA FANANGONANAY NY DATA TENANAO
Mety hanangona angon-drakitra momba anao izahay amin'ny fanomezanao ny angon-drakitra mivantana aminay (ohatra amin'ny famenoana taratasy ao amin'ny tranokalanay na amin'ny fandefasana mailaka anay). Mety hanangona avy hatrany ny angona sasany avy aminao izahay rehefa mampiasa ny tranokalanay ianao amin'ny fampiasana cookies sy teknolojia mitovy. Azafady, jereo ny politikan'ny cookie ho an'ny antsipiriany bebe kokoa momba izany.
Mety hahazo angon-drakitra avy amin'ny antoko fahatelo toy ny mpamatsy analyse toa an'i Google any ivelan'ny Vondrona Eoropeana, tambajotra dokam-barotra toy ny Facebook any ivelan'ny Vondrona Eoropeana, toy ny mpanome vaovao momba ny fikarohana toa an'i Google any ivelan'ny Vondrona Eoropeana, mpamatsy tolotra ara-teknika, fandoavam-bola ary fanaterana. , toy ny mpikirakira data na mpanangona.
Mety hahazo angona avy amin'ny loharanom-baovao azo ampahibemaso toy ny Companies House sy ny rejisitry ny fifidianana miorina ao anatin'ny EU ihany koa izahay.
Ny antony ara-dalàna amin'ny fanodinana ny angon-drakitrao manokana handefasana fifandraisana ara-barotra ho anao dia ny fanekenao na ny tombontsoantsika ara-dalàna (izany hoe ny fampitomboana ny orinasanay).
Araka ny lalàna momba ny tsiambaratelo sy ny fifandraisana elektronika, Afaka mandefa fifandraisana ara-barotra avy aminay izahay raha toa ka (i) nividy na nangataka fampahalalana taminay momba ny entanay na ny serivisinay ianao na (ii) nanaiky handray fifandraisana ara-barotra ianao ary amin'ny tranga tsirairay dia tsy nisafidy ny tsy handray izany fifandraisana izany ianao. hatramin'izay. Eo ambanin'ireo fitsipika ireo, raha orinasa voafetra ianao, dia mety handefa mailaka momba ny varotra anao izahay raha tsy misy ny fanekenao. Na izany aza dia mbola afaka misafidy tsy handray mailaka ara-barotra avy aminay ianao amin'ny fotoana rehetra.
Tsy hizara ny angonao manokana amin'ny antoko fahatelo izahay ho an'ny tanjona ara-barotra na fivarotana azy manokana.
Azonao atao ny mangataka aminay na antoko fahatelo mba hampitsahatra ny fandefasana hafatra ara-barotra aminao amin'ny fotoana rehetra amin'ny fanarahana ny rohy miala amin'ny hafatra ara-barotra alefa aminao na OR amin'ny alàlan'ny mailaka aminay. [email voaaro] na oviana na oviana.
Raha miala amin'ny fandraisana fifandraisana ara-barotra ianao dia tsy mihatra amin'ny angon-drakitra manokana nomena noho ny fifampiraharahana hafa, toy ny fividianana, fisoratana anarana fiantohana sns.
Fampahafantarana ny angon-drakinao manokana
Mety tsy maintsy mizara ny angon-drakitrao manokana amin'ireo antoko voalaza etsy ambany izahay:
Orinasa hafa ao amin'ny vondronay izay manome serivisy ho anay.
Mpanome tolotra manome serivisy IT sy fitantanana rafitra.
Mpanolo-tsaina matihanina ao anatin'izany ny dokotera, ny mpisolovava, ny banky, ny mpanadihady ary ny fiantohana.
Sampan-draharaham-panjakana mitaky antsika hanao tatitra ny hetsika fanodinana.
Mitaky ny antoko fahatelo rehetra izay amindranay ny angonao izahay mba hanaja ny fiarovana ny angon-drakitrao manokana ary hitondra izany araka ny lalàna. Izahay dia mamela ireo antoko fahatelo ireo handamina ny angon-drakitrao manokana ho an'ny tanjona voafaritra sy mifanaraka amin'ny toromarikay.
Mety hizara ny angon-drakitrao manokana ao anatin'ny vondron'orinasa misy anay izahay izay misy ny famindrana ny angonao any ivelan'ny faritra ara-toekarena Eoropeana (EEA).
Iharan'ny fepetran'ny Fitsipika ankapobeny momba ny fiarovana ny angon-drakitra miaro ny angon-drakitrao manokana izahay. Raha mamindra ny angonao amin'ny antoko fahatelo ivelan'ny EEA izahay, dia ho azonay antoka fa misy ny fiarovana sasany mba hiantohana ny fiarovana mitovy amin'ny angon-drakitrao manokana. Toy izany:
Azonay atao ny mamindra ny angon-drakitrao manokana any amin'ireo firenena izay neken'ny Vaomiera Eoropeana ho manome fiarovana ampy ho an'ny angon-drakitra manokana; na
Raha mampiasa mpamatsy monina any Etazonia izay ao anatin'ny EU-US Privacy Shield izahay, dia mety hamindra angona amin'izy ireo, satria manana fiarovana mitovy amin'izany izy ireo; na
Raha mampiasa mpanome tolotra sasantsasany izay miorina ivelan'ny EEA izahay, dia mety hampiasa fifanarahana manokana na fitsipi-pitondran-tena na rafitra fanamarinana ankatoavin'ny Vaomiera Eoropeana izay manome ny angon-drakitra manokana mitovy amin'ny fiarovana ananany any Eoropa.
Raha tsy misy ireo fiarovana voalaza etsy ambony ireo dia afaka mangataka ny fanekenao mazava izahay amin'ny famindrana manokana. Hanana zo ianao hanaisotra io fanekena io amin'ny fotoana rehetra.
Nametraka fepetra fiarovana izahay mba hisorohana ny angon-drakitrao manokana tsy ho very tsy nahy, ampiasaina, ovaina, nambara, na nidirana tsy nahazoana alalana. Avelanay ihany koa ny fidirana amin'ny angon-drakitrao manokana ho an'ireo mpiasa sy mpiara-miombon'antoka manana orinasa mila mahafantatra izany angona izany. Ny angon-drakitrao manokana ihany no hokarakarain'izy ireo amin'ny toromarikay ary tsy maintsy mitazona izany ho tsiambaratelo.
Manana fomba fiasa izahay hiatrehana izay mety ho fandikana ny angon-drakitra manokana ary hampandre anao sy izay mpandrindra azo ampiharina amin'ny fanitsakitsahana raha takiana ara-dalàna izahay.
Ny angon-drakitrao manokana ihany no hotazoninay mandritra ny fotoana ilaina mba hanatanterahana ny tanjona nangoninay azy, ao anatin'izany ny hanomezana fahafaham-po ny fepetra takian'ny lalàna, ny kaonty na ny tatitra.
Rehefa manapa-kevitra ny amin'ny fotoana mety hitazomana ny angon-drakitra isika dia mijery ny habeny, ny toetrany ary ny fahatsapany, ny loza mety hitranga amin'ny fampiasana tsy nahazoana alalana na fampahafantarana, ny tanjona fanodinana, raha azo tanterahina amin'ny fomba hafa izany, ary ny fepetra takian'ny lalàna.
Ho an'ny tanjona hetra dia takian'ny lalàna isika hitahiry ny vaovao fototra momba ny mpanjifantsika (anisan'izany ny Fifandraisana, Identity, Financial and Transaction Data) mandritra ny enin-taona taorian'ny nitsaharan'izy ireo ho mpanjifa.
Amin'ny toe-javatra sasany dia mety ataonay anarana tsy fantatra anarana ny angon-drakitrao manokana ho an'ny tanjona fikarohana na antontan'isa ka mety hampiasa izany fampahalalana izany mandritra ny fotoana tsy voafetra tsy misy fampilazana fanampiny aminao.
Araka ny lalàna momba ny fiarovana ny angon-drakitra dia manana zo mifandraika amin'ny angon-drakitrao manokana ianao izay ahitana ny zo hangataka fidirana, fanitsiana, famafana, famerana, famindrana, hanohitra ny fanodinana, ny fampitana angon-drakitra ary (izay misy ny fanekena ara-dalàna amin'ny fanodinana) manala ny fanekena.
Afaka mahita bebe kokoa momba ireo zo ireo ianao ao amin'ny:
Raha te hampiasa ny iray amin'ireo zo voalaza etsy ambony ianao dia alefaso mailaka izahay amin'ny [email voaaro]
Tsy mila mandoa sara ianao raha te hiditra amin'ny angon-drakitrao manokana (na hampiasa ny zo hafa). Na izany aza, mety handoa sara mirary izahay raha toa ka miharihary fa tsy mitombina, miverimberina na mihoa-pampana ny fangatahanao na mandà tsy hanaraka ny fangatahanao amin'ireo toe-javatra ireo.
Mety mila mangataka fampahalalana manokana aminao izahay hanampy anay hanamarina ny mombamomba anao sy hiantohana ny zonao hiditra amin'ny angon-drakitrao manokana (na hampiasa ny zonao hafa). Ity dia fepetra fiarovana mba hahazoana antoka fa tsy ampahafantarina amin'ny olona tsy manan-jo handray izany ny angona manokana. Mety hifandray aminao ihany koa izahay hanontany anao raha mila fanazavana fanampiny momba ny fangatahanao hanafainganana ny valinteninay.
Miezaka mamaly ny fangatahana ara-dalàna rehetra izahay ao anatin'ny iray volana. Indraindray dia mety haharitra iray volana izany raha toa ka sarotra be ny fangatahanao na efa nanao fangatahana maromaro ianao. Amin'ity tranga ity, hampahafantatra anao izahay.
Raha tsy faly amin'ny lafiny rehetra amin'ny fomba fanangonana sy fampiasanay ny angon-drakitrao ianao dia manan-jo hitaraina any amin'ny Biraon'ny Kaomisera momba ny Fampahalalam-baovao (ICO), ny fahefana mpanara-maso UK momba ny olana momba ny fiarovana ny angona (www.ico.org.uk). Tokony ho velom-pankasitrahana izahay raha hifandray aminay aloha ianao raha toa ka manana fitarainana ianao mba hahafahanay manandrana mamaha izany ho anao.
Ity tranonkala ity dia mety misy rohy mankamin'ny tranonkala fahatelo, plug-in ary fampiharana. Ny fikitihana ireo rohy ireo na ahafahanao mampifandray ireo fifandraisana ireo dia ahafahan'ny antoko fahatelo manangona na mizara angona momba anao. Tsy mifehy ireo tranokalan'ny antoko fahatelo izahay ary tsy tompon'andraikitra amin'ny fanambarana tsiambaratelo ataon'izy ireo. Rehefa mandao ny tranokalanay izahay dia mamporisika anao hamaky ny fampahafantarana momba ny tsiambaratelo isaky ny tranokala mitsidika anao.
Azonao atao ny mametraka ny navigateur anao handà ny cookies rehetra na ny sasany amin'ny navigateur, na hanairana anao rehefa mametraka na miditra cookies ny tranokala. Raha esorinao na mandà ny mofomamy ianao, azafady mariho fa ny ampahany sasany amin'ity tranokala ity dia mety ho lasa tsy azo idirana na tsy miasa araka ny tokony ho izy. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny cookies ampiasainay dia jereo ny anay politika cookie.